jeudi, 02 juillet 2020 21:15
Covid-19: Miaka-dapa eny amin’ny Antenimieram-pirenena
Ahitana tranga Covid-19 eny amin’ny Antenimieram-pirenena. Misy Solombavambahoaka voa.
Nanao fanambarana tamin’ny tambazotra sosialy facebook, androany, i Tsabotokay Honoré, solombavambahoaka voafidy tao Vohipeno « manambara etoana fa marary. Efa natao test fa tsy mbola nivaly nefa moa raha ny fahatsapana ny vatako dia reradreraka ». Manohy ny fanambarana izy fa « Efa mahazo fitsaboana ara-dalàna ety amin’ny toeram-pitsaboana aho ary mandroso fahasalamana tsara ».
Nanao fanentanana i Tsabotokay Honoré fa « tsy tsaho ary tsy mifidy » ity valanaretina ity ka « araho ny toromarika ». « Niezaka aho niaro tena fa aretina izy ity … mangataka vavaka ».
Nisy androany fakana singa hanaovana fitiliana PCR tamin’ireo Solombavam-bahoaka tonga teny amin’ny CCI Ivato. Toy izany koa ny mpiasa.
Isan-taona ny revio amerikanina momba ny fitsarana « The Best Lawyers » dia mandahatra sy manasokajy ireo Mpisolovava ao Frantsa araka ny fahaizany sy ny zava-bitany. Fifidianana ataon’ireo Mpisolovava no andaharana azy ireo.
Isan’ireo Mpisolovava misongadina any Frantsa ho an’ny taona 2021 i Hery Frédéric Ranjeva, zanaky Pr Raymond Ranjeva ity farany ary isan’ireo Mpisolovava ao amin’ny « cabinet » Foley Hoag ao Frantsa manana traikefa amin’ny « Arbitrage International ».
jeudi, 02 juillet 2020 20:58
Tontolon'ny kanto: Nodimandry teo amin’ny faha-67 taonany i Bakomanga
Lavo ny andrarezina. Nodimandry androany i Rasoarinala Mariette na Bakomanga anarana nahafantaran’ny maro azy teo amin’ny tontolon'ny kanto.
Teraka ny taona 1953 i Bakomanga, ary i Manga no fiantsoan'ny Ray aman-dreniny azy fony fahakeliny. Teo amin'ny faha-13 taonany izy no nanomboka nihira.
Mpihira sady mpandihy tao amin'ny Tarika Ramafadrahona izy nanomboka ny taona 1964. Nandeha irery ary nanana tarika nitondra ny anarany hoe "Bakomanga" nanomboka ny taona 1996.
Hira gasy sy vakodrazana malagasy no tena nahalalana azy, ary efa nitetezany faritra maro teto Madagasikara sy firenena maro nanaovan’ny tarika fampisehoana toa an’i Alzeria, Amerika, Frantsa, Japana, Maorisy.
jeudi, 02 juillet 2020 20:39
APIPA: Voatendry ho Tale jeneraly Rakotonjanahary Ranto
Voatendry ho Tale jeneralin’ny APIPA (Autorité pour la Protection contre les Inondations de la Plaine d'Antananarivo) nandritra ny filankevitry ny minisitra natao ny 1 jolay 2020 Rakotonjanahary Ranto. Izy no handimby an-dRateloson Philippe, ity farany izay nisahana io andraikitra io efa folo taona mahery.
Injeniera momba ny rano nivoaka teny amin’ny sekoly ambony Polyteknika Antananarivo i Rakotonjanahary Ranto. Efa talem-paritra momba ny rano sy fidiovana ary ny fahadiovana teto Analamanga izy, ary efa Tale teo anivon’ny ministeran’ny angovo sy ny rano ary ny akoranafo ihany koa.
jeudi, 02 juillet 2020 15:42
Covid 19: Olona avy amin'ny Firenena 15 no tafiditra anaty lisitra mahazo miditra any Eoropa
Hisokatra ho amin'ny olona avy amin'ny Firenena 15 ny sisintany eoropeanina manomboka ity volana jolay ity taorian'ny fihibohana iadiana amin'ny valanaretina Covid-19:
Marotolana – Ambanja: Lehilahy iray tratra niaraka tamin’ny rongony 320 kg
Tra-tehaky ny Zandary tao Antsahabe Fokontany Mahadera, Kaominina Marotolana, Distrika Ambanja ny lehilahy iray, 31 taona. Sady mifoka no mivarotra ary mitahiry rongony io lehilahy io araka ny angom-baovao azon’ny Zandary ka nitarika ho amin’ny fisamborana azy izao. Mbola nahitana rongony 16 gony milanja 320 kg tao aminy.
jeudi, 02 juillet 2020 12:43
OMAPI: Voatendry ho Tale Jeneraly Rtoa Andrianarivo Lalaina Priscilla
Voatendry ho tale Jeneralin’ny Office Malgache de la Propriété Industrielle (OMAPI) nandritra ny filankevitry ny minisitra ny 1 jolay 2020 Rtoa Andrianarivo Lalaina Priscilla, handimby toerana an-dRavoaraharison Christian Claude.
Anisan’ireo firenena telo voalohany aty Afrika mandrakitra ho nomerika ireo antontan-taratasy momba ny fizakamanana indostrialy i Madagasikara. Nanomboka tamin’ny novambra 2014 no nirosoan’ny OMAPI tamin’io fampiasana teknolojia vaovao io.
100 andro teo amperin'asa ny Goverinora RAFIDISON Richard Théodore sy ny ekipany.
Miditra koa amin'ny enim-bolana faha-2 izay tsy maintsy hanatanterahana ireo asa sy vinan'ny taom-piasana 2020.
Nandritra izay 03 volana niatrehana ny ady tamin'ny aretina Covid-19 izay dia sady nosakelehina ihany koa ny fiomanana amin'ny asa fampandrosoana.
Fanamby lehibe no apetraka amin'ity enom-bolana faharoa na "deuxième semestre" ity.
Nofoanana nandritra filankevitry ny minisitra ny 1 jolay 2020 ny didim-panjakana nanendry ny Sekretera Jeneraly lefitra eo anivon’ny Governemanta.
Nosoloina tamin’ny herinandro ihany koa ny Talen’ny kabinetra sivily ny Praiminisitra, ka jeneraly no mitana io andraikitra io ankehitriny.